IBower Bend Bungalow - I-Airbnb
IBower Bend Bungalow
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguBower
Indlu enevaranda entsha, enamagumbi okulala amabini, indawo efanelekileyo yokuphola epholileyo yabantu abalala bodwa okanye abathandanayo.
IBower Bend Bungalow ikwisiqithi saseGunbower. I-Cohuna yenye yezona ndawo ziphambili zokufikelela kwi-Gunbower Island nendlela ofika ngayo kwi-Bower Bend Bungalow, eyenza ibe yindawo efanelekileyo yokuhlala kwabo bathanda ipikniki, ukuloba, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngephenyane emanzini, ukuhamba ngebhayisekile entabeni, ukukhwela ihashe okanye nje ukuqhuba ihlathi.
Indlu yethu enevaranda entle enamagumbi okulala elinye ithe nca kwindlu enkulu, eyahlukaniswe ngumzila weverandah.
Igumbi lokulala elivulekileyo linendawo yokufundela kaBir, indawo yokufunda, ifeni esesilingini kunye nomnyango omkhulu wokutyibilika ukuze ubone indlela esiphila ngayo kwilizwe lethu.
Indawo yokuhlala evulekileyo nekhitshi elincinci ziqaqambile kwaye zibukeka kakuhle, zahlula inkqubo yokufudumeza/yokupholisa kunye nefenitshala etofotofo.
Ikhitshi elincinci linefriji, iketile, i-toaster, i-microwave, kunye nekofu, iti kunye neswekile.
I-Wi-Fi kunye nendawo eninzi yokupaka imoto nesikhephe.
Indawo yangaphandle yokonwabela ii-sunsets zethu ezintle. Iindwendwe ziza kukwazi ukufikelela kwindlu enevaranda, i-verandah yayo kunye nendawo ephandle
kunye ne-BBQ. Ukupaka okwaneleyo
I-Gunbower Island sesona siqithi sikhulu eOstreliya. Isuka phakathi kweTorrumbarry neKoondrook, eyilwe yisebe leGunbower Creek emlanjeni waseMurray emva koko iphinde iwujoyine. Inehlathi lesibini ngobukhulu lomlambo i-Victoria, iilwandle ezinentlabathi, ihlahla elinomthunzi kwaye ijongwa njengenye yezona ndawo zibalulekileyo eziyi-10 kwiMurray Darling Basin. Liyikhaya leentaka ezininzi, izilwanyana zasekhaya, izilwanyana zasekhaya kunye nezilwanyana zasekhaya.
Kukho iikhilomitha eziyi-130 zomda wamanzi kwaye idla ngokugqunywe ngamahlathi endawo kunye neendawo ezinamanzi eGunbower National Park kunye neGunbower State Forest.
Unokuthanda ukutya ngokujonga i-Gunbower Creek ngoxa use-Cohuna kwenye yeebhari zethu zasekuhlaleni, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zekofu ukuze wonwabele ubumnandi bakho. Yonwabela ukutya okumuncis 'iintupha okuvela kwimveliso yasekuhlaleni kunye neemenyu ukuze wanelise intsapho yonke.
Yintoni ekumele yenziwe nento omele uyenze:
Ibhulorho ukuya kwiBridge Triathlon ngoMatshi.
I-Cohuna Farmers & Makers Market yimarike ye-boutique ebonisa ukutya okufreshi, imveliso kunye nezobugcisa ezisemgangathweni ezivela kwiindawo zasekuhlaleni nezikufutshane. Efumaneka kwiCohuna Garden Park kwi-Gunbower Creek emangalisayo. Imarike isebenza ngeCawa yesine nyanga nganye ukususela nge-8 ukuya nge-12.
Thatha uhambo ngesikhephe esihle kwi-Gunbower Creek entle kwi-Wetlander.
Qesha isikhephe, i-kayak, ibhodi yokutyibiliza emanzini.
Izifundo zokukhwela ihashe.
Umbuki zindwendwe ngu- Bower
Ikhaya lethu losapho lidibene nendlu enevaranda.
Sikhona ukuze sikuncede ukuba ufuna ibe sinokwabelana ngendawo ephandle kufutshane nekhaya lethu.
Njengoko sihlala apha, sineenja ezimbini, zinobuhlobo kakhulu. Kodwa ke, ukuba ungathanda indawo engabhatalelwayo yezilwanyana zasekhaya, loo nto inokwamkela ezinye zeendawo oza kuzihlala.
Njengoko sihlala apha,…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cohuna